Wiilal U dhashey Qowmiyada Taamilka Oo Warbaahintooda lagu Tilmaamey Garac waa maxay Sababtu ? – hareerley News
Wiilal u dhashey Wadanka Srilaanka ayaa lagu Eedeeyey in ay si karti ku dheehan tahay u taageereen Qowmiyada Taamilka Oo iyaga ruuxadooda ay ka soo jeedaan.
Warbaahintaasi ayaa markasta u Ololeysa Qowmiyadaasi marka loo Eego Ugu badanaan wadankaasi Srilaanka,hadana ay u taliyaan laangaabyo markaasi iska dhiga in iyagu ay Talada Wadankaasi isku Badbadalaan waa sida ay hadalka u dhigeene.
Wiilishan ka soo jeeda Qowmiyadan Taamilka ayaa Warbaahinada kale Ee Markaasi Xukuumadaasi Fangareeyso ku tilmaamey in ay Garacoowdey warbaahintan iyagoo markaasi aananba Waxba Xeerineynin .
Warbaahinadaan kale ayaa markaasi ka soo horjeeda Qowmiyadaha Taamilka oo markaasi isku baheystay iyagoo maskaxda ka Xadey kuwo badan Oo Qomiyadaasi Taamilka ka soo jeeda oo ay markaasi Wadashaqeyni ka dhaxeyso iyagoo Og in ay yihiin kuwa Dulman.
Laakiinse Wiilishaan Warbaahinta Suraya ayaa wacad ku marey in aysanba marnaba u joojineynin doonin in ay taageero u muujiyaan Qoomiyadooda Oo kuwa Talada haya ay ku galaangashaan marwalbaba iyagoo sheegayna in ay hiil iyo hoobaba la garab istaagayaan tusinayana wixii ay dantooda iyo Wanaagoodaba ku jirto ugana digayaan Qataraha ku soo foodleh.
Warbaahinadaan kale Ee markastaaba kala qobqoba Qomiyadaan Taamilka ayaa iyagu markastaaba dhankasta ka soo fadhiista warbaahinadooda iyagoo shacabka wadankaasi u tusa in warbaahintaasi iyo Qowmiyada Taamilkaba aysan aheyn kuwa aan marnaba Caadi aheyn dhexdoodana waxba ku laheyn Warbaahintooduna dhexdhexaad ahayn sinaba.
Qowmiyada Taamilka ayaa ah Qowmiyad markaasi ku dulman Wadanka Srilaanka iyagoo loo Geystey xasuuq ba’an Oo dunidu ku daawatey Xasuuqaasi oo aan loo Aaba yeelin mid yar iyo mid weynba,
Donald Trump: Sidee xilka looga qaadi karaa madaxweynaha Mareykanka?
Xisbiga Dimuqraadiga ayaa qorsheynaya in baaritaanno la sameeyo, si loo ogaado in Madaxweyne Trump uu mudan yahay in xilka looga qaado xiriirkii uu dowladda Ukraine kala sameeyay arrinta ku saabsan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Way jireen baaqyo ku saabsan in Trump xil ka qaadis lagu sameeyo intii ay socdeen baaritaannadii sannadaha […]
Cabdiwali Gaas oo baaq u diray dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadda
Hogaamiyihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dowladda dhexe ee dowlad goboleedyadda ugu baaqay in ay soo Afjaraan Khilaafka Mudada dheer ka dhex taagan. Waxaa uu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya laga doonaayo in ay tixgaliso hanaanka maamul goboleedyada ay ku shaqeeyaan, islamarkaana ay dardarliso dhismaha maamul goboleedyadda. Cabdiwali Gaas ayaa […]
(Dhageyso):-Musharixii Hogaan Xigeenka K/Galbeed Cabduqadir (Shido) Oo Afka Furtey
Posted on September 25, 2019 September 26, 2019 Author Hareerley News
Musharixii markii hore Isu soo taagey Hogaan Xigeenka K/Galbeed Cabduqaadir Cismaan Cali (Shido) Oo Wareeysi Siiyey Warbaahinta Danan ayaa Eedayn Xoogan dusha kaga tuurey Gudoomiyaha Gobolka sh/hoose Ibraahin Aadan Cali (Najax) iyo Gudoomiyaha Degmada Marka Cabdulaahi Cali Axmed (Wafoow). MudaneCabduqaadir Cismaan(Shido) ahaana Xildhibaanadii hore Ee Baarlamaanka Dowladii kumeel gaarka aheyd ee FS ayaa ka hadley […]